Wuxi Innovate Machinery Development Co., Ltd yakavambwa muna 2010 uye iri muWuxi, guta rakanaka parutivi rweTaihu Lake.Tiri bhizimusi rehi-tech rakabatanidzwa neR & D, kugadzira, kugovera uye nehukama hwehukama, hunyanzvi hwekugadzira, kugadzira uye kuiswa kwemidziyo muCosmetiki, mushonga, chikafu, akanaka maindasitiri maindasitiri, nezvimwe.
Pane hwaro hwekugara nhaka echinyakare makemikari ekugadzira zvigadzirwa, isu tinoteerera zvakanyanya kuvandudza, hunyanzvi uye kuvandudza tekinoroji.Hatisisina kugutsikana nechigadzirwa chimwe chete, tinotarisa pane zvisiri-zvakajairika dhizaini uye yakakwana mitsara yekugadzira.Tinogona kupa mhinduro dzakazara vatengi vedu, kusanganisira dhizaini, kugadzira uye kumisikidza yekugadzira mitsara yematanho kubva kugadzirira kusvika kurongedza.
Zvishandiso zvedu zvinoburitswa pasi peIS09001: 2008 yemhando yekudzora sisitimu yakajairwa, zvese zvigadzirwa zvakawana GMP zvemhando yepamusoro, zvigadzirwa zvakawanda zvakaverengerwa neEC.
Nehunyanzvi hwekuvandudza tekinoroji, yakakwana kugadzira uye neyakajairwa masevhisi, kambani yedu inokosheswa nevatengi vedu. Hunhu / nharaunda / chengetedzo manejimendi sisitimu inopa yakasimba mamiriro ekuvandudza musika, ichifukidza yega yevatengi vedu kunakidzwa neyedu yepamusoro mhando zvigadzirwa nemasevhisi.
Zvigadzirwa zvedu zvave zvichishandiswa mumaindasitiri mazhinji uye kushumira vatengi munyika zhinji pasi rese.
Seinotungamira tekinoroji SME (diki uye yepakati bhizinesi) inoshambisirwa nehurumende yeJiangsu Province, tiri pasi pekukura nekukurumidza, kusimudzira, kuunza materevhizheni esainzi neetekinoroji uye epamusoro-magumo zvigadzirwa zvekugadzirisa zvigadzirwa zvedu. Ngatikurei nekukura pamwe chete, tichigadzira iyo yekuhwina-kuhwina mamiriro uye nekupa kune kambani nenzanga!
Isu takagara tichisimbirira pamusoro pekushanduka kwemhinduro, tikashandisa mari yakanaka uye zviwanikwa zvevanhu mukuvandudza tekinoroji, uye kuita kuti kugadziridzwa kwekugadzirwa, kuzadzikise izvo zvinodiwa netarisiro kubva kumatunhu ese nematunhu.
Tsika yedu: Kugadziridza, Kuvimbika, Kuendesa, Kutendeseka